Qeerroo QABSOON OROMOO NI TIIFEE MALEE HIN ROOBNEE ! »
Qeerroo QABSOON OROMOO NI TIIFEE MALEE HIN ROOBNEE !
NI TIIFEE MALEE HIN ROOBNEE !!!
Qabsoon nuuti amma itti seennee jirru, eegee qeerransaa hin qabanii….isa jedhaniin tokko.Kana booda, Milkaa’uuf wareegamni nu gaafatu , yoo duubatti deebineef wareegama nu gaafatu gonkumaa hin caaluu. Bakka amma irra jirru irraa duubatti deebinaan, of awwaallee , awwaala keenya irratti diinni akka sirbuu hayyamuudha. Sochiin gama hundaa itti seenamee jiru gonkumaa laafachuu fi lafarrallee harkifachuu hin qabu. Diina afuura kutuu barbaachisa. Gama hundaan irratti hojjatanii diina mogolee buusuudhaa. Haalli ammaan tana keessa jirrun gonkumaa dagamuu hin qabnuu. Bilisummaa saba keenyaa fi walabummaa Oromiyaa barbaanna taanaan, kanarra hojjachuu nu barbaachisa.wal gargaarsaa fi wal tumsuun har’aa argaa jirru , gammachuun inni nu keessatti uumuu qabu, waan dur qabnuu deeffachuu keenyatti malee, waan haaraa of keessa dhaabaa akka jirrutti ta’uu hin qabu. Wareegamni baasaa jirrus, ulfaataa ta’uus, Ilmaan Oromoo Biyya Itoophiyaa jedhamtuu fi sirnoota Oromoo fixaniif iyyuu , waggoota 100 oliif lubbun baasaa turaniin wal bira qabnee wayita ilaalluu, waan hin malleef dhumuun isaanii nu gaddisiisuus, wareegamni kamiyyuu Oromiyaaf kan maluu ta’uutti boonnee, isa fulduraaf hiriira qabachuu akka qabnuutti amanuu qabnaa.
Sochiin har’aa kun , gootummaan har’aa kun, fiilmii holii wood akka hin taanee beekuun barbaachisaadhaa. Ykn kubbaa miilaa har’aa addunyaa irraa , guyyaa sirbinee galgala akka hin ciifnee qalbifachuu qabna. Oromoon kan of ilaaluu qabu, akka baayyina keenyaatti humna qabaachuu qabaachuu dandeenyu keessaa hangam milkeessinee ? isa jedhuun of ilaaluu nu barbaachisa. Oromoon humna qabaachuu qabu keessaa dhibbeentaa 5 illee hin guuttatiin jirra. Sochiin amma argaa jirru kun isa kaleessaa irra wayyaadhaa kan jechisiisuu malee, Biyya keenya dhuunfachuuf nu dandeessisuu miti. Kana hubadhaa.
Tokko jennee lafaa ka’aa jirra. Humni kun nu ga’aa jennee kan itti dhaadannu miti. Humna amma qabna jennu irra, Oromoo ta’ee humna diinaa kan ta’eetu caalaa hubadhaa. Akka adeemsa qabsootti Ummata Qabsoo keessatti seensisaa fi hirmaachiisuu eegaluu keenya qofatti amanuu qabnaa. Ummatatu qabsootti siila’aa jira. Sochiin Qabsoo Oromoo amma irra jiru, Rooba bona keessaati. Hunda wal ga’ee hin roobu. Walitti fufiinsaanis hin roobu. Amma barbaadamees hin roobu. Roobee bu’aa tokkof hin ooltu. Lafuma qofa qabbaneessa malee. Rooba garaa nama hin geenyedha. kanaaf ammo sababaan yeroodhaa. Yerooma isaatu Roobaaf hin tolu. Halli amma keessa jirru kanumaan wal fakkaataa. Qabsoo isa jiruu fi jireenyaa, isa jiraachuu fi dhabamutti deemaa jirra. Gabaabaatti Qabsoon Oromoo kan ammaarra tarkaanfatee Rooba Gannaatti ce’uu feesisa. Roobi gannaa, abdii waa hundaati . abdii umama maraati. Yeroo jijjiree ifa fida. Jireenya namaaf tola. Addaan hin citu. Roobni gannaa bakakkaa fi gumgummi qaba. Lolaa jabaa qaba. Laga guuta. Qilleensa qulqulleessa. Qabbana bubbuluu qaba. Walumaa galatti ganni Roobaaf yeroo isaati. Roobni gannaa Tiifuu hin qabu. Tiifuun jiraannaan illee Rooana booda. Rooba gannaa ta’uutti ce’uuf kanarra hojjachuu nu barbaachisa.
Qabsoon Oromoo ni Tiifee malee, hin roobnee kanan jedheef kanaafii. Akka Rooba gannaa ta’uu qabnaa. Humni Oromoo Rooba Gannaati. Yeroo fi bakka illee jijjiruu danda’aa. Bu’aa qabeessadha. Umama hundaaf nagaa argamsiisa. Kanaaf kan nu eeggatu Bokkaa gannaa taanee, geeddarumsa ofiif fiduudhaa. Sabni keenya yeroo guututti waliin dhaabbatee jira jennee afaan guunnee yoo ittin dhaadannee, yeroon nu haftee kan lubbuu waliif laachuu waan taatuuf yeroo sana akka wal hin taajjabneef waan irra jirru akka dansaatti adda baafachuu qabnaa. murtiin Qeerroon keessa jiru, wareegama barbaachisu kafaluuf akkuma qophaa’ee jiru, Hojjataanis, Daldalaanis, beektoonnis kkf sadarkaa sanarra ga’uu qaban. Bakka hundaa sochii jiru wal fakkeessinaan gonkumaa diinni nu dura hin dhaabbattu. Gama biraan Ilmaan Oromoo irree diinaaf ta’an achi keessatti dhiifnee , Roobatti geeddaranee yoo jennee of gawwamsuudhaa.Sochii keenya har’aa ittiin boonnu kana sochii siyaasaa waan ta’eef waama xiqqootuu balleessuu danda’aa. Kana booda waan fedhe dhalatuu diinaaf qaawwaa uumuun barbaachisaa miti.
Akkuma nuuti har’aa Oromoon jabaatee jennuu kana , diinnis harkuma dachaan nu irratti hojjatee akka nu laaffisuu yaaluu beekuun barbaachisaadhaa. Yeroo hedduu bakka ga’uu qabduu osoo hin geenyee , ga’ee jettee yoo dhaadattee odeeffannoo diinaaf laattee diina ofirratti dammaqisita. Waan irraa of qusachuu qabnuu waa hedduutu jira. Mee fakkeenya tokko haa fudhannu. Har’aa OPDOn sochii Ummata Oromoo addatti qeerroo irraa sodaa qabaniin, laafachuu argaa jirra. Inumaa waan abbootiin gadaa jedhan hojii irra oolchuuf murachuu dubbachaa jiru. Haasaan Anga’oonni Oromiyaa dubbachaa jiranis nama hawwachuu danda’aa. tapha kana keessatti namoonni hedduun waan baayyee jechaa jiru. Ijoollee qacalummaan wareegamtee diina dirqisiisaa jirtu osoo hin faarsinee, Gootummaa dhaloota har’aa osoo hin dhaadhessinee, Lammaan Kana dubbatee gootaa jechuun sirriidhaa ? OPDOn dirqamtee fedhii ummataa guutuu dandeessi. Adeemsi kun deemee deemee Ummata hawwachuuf kan wixinamee yoo taatee, boruu waan dubbannuu hin jiruu har’umaa hojii gama hundaa isaan dirqisiisee harka lachiisiisun ala dubbachuun bu’aa hin qabu. Bilisummaa Oromoon barbaadu, sagantaa siyaasaa OPDO gonkumaa hin deebisu waan ta’eef.
Sochiileen akkasii kun bubbulanii rakkoo uumanii ummata keenya adda facaasuu waan dana’aniif , humna qabaachuu malluu bira osoo hin geenyee, dubbiin xumura jirtii yoo jennee booda nu rakkiftii. Kaleessa gandummaan akka wal hiinee dubbachaa turre. Har’aa innu umamaan gandummaan akka chaappaa itti maxxantee waliin haa rakkatu malee, gandummaan haasaa ta’ee bira dabarree jirra. Kaleessa, sochii qabsoo gama tokkon qofaa dhaga’aa fi dhaga’aa turre, guutuu Oromiyaatti ce’aa jiraachuu argaa jirra. Adeemsa ammaan , Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru qindeeffannee, dursinee galii barbaannuun ga’uu akka dandeenyu hubannee jirra. Gama naamusaanis sadarkaan irra jirru, sochii isa jabaatti ce’uuf haalli mijataa ta’uu qalbifannee jirra. Kan hundarra nama gammachiisuu dhalootaa fi saba du’aa hin sodaannee uumnee jirra. Gootummaa waggaa 40, 50, 100 dura raawwatamee dhageenyee , osoo gooti akkasii nu dhalatee ka jechaa turre, har’aa goota kumaatamaan uumnee jirra. Hojjataa mindaaf jedhee mirga isaa dabarsee kennuu kolaafnee, hagabuu buleen bilisummaan barbaada ka jedhuu argachaa jirra. Hidhaa fi ajjeechaan duubatti akka hin deebifnee guutummaatti mirkaneeffannee jirra.
Kun hundi akka humna walii galaa Oromoon qabaachuu malu keessaa , Qabsoon Oromoo Tiifuu irra jiraachuu ni ibsa. Amma waan gubbaattti tarrifnee kana walitti qabnee, qabsoo bifa hundaa gaafa gaggeessutti ceenee, Rooba gannaatti ce’uu nu argisiisa. Wayyaaneen yeroo ammaa gama hundaan humna keenya sababaa adda addaan adda ciruu kan barbaaddu kanaafii. Boruu humna haalaan jabaa nu barbaachisa. Hojiin wayyaaneen nu uumtuu salphaa hin taatu. Ummati keenya buqqa’uu heddumaachuu mala. Walitti bu’iinsi isheen uumtuus hedduummaachuu mala. Badiin isheen ofiin raawwattee nutti qabattu jiraachuu mala. Kanaaf waan isheen nu irratti uumtu hundaa dandamachuuf, Roobatti ce’uu qabna. Humna keenya qindeeffachuu qabnaa. Humna keenya facaasuuf yeroo gama hundaan rakkoo nutti uumtuu, gara dubbiin jirutti fiiguu osoo hin taanee, bakkuma jirrutti haala umamee cabsinee akka irra aanuu dandeenyu ummachuu nu barbaachisa.
Har’llee gama hundaan haa hojjannu. Irree Irreecha irratti arginee kana hojii guyyuu keessatti argisiisuuf hojjachuu nuu barbaachisa. Qoqqobbiin wayyaanee laaffisuuf gaggeeffamuu, hanga maatii wayyaaneetti gadi buufnee hojjachuu nu barbaachisa. Sochii dhorkuun qabeenyaa fi saamciha wayyaanee qofa irratti osoo hin taanee, Fiilmiilee fi Diraamaalee TV fi Waan adda addaan Ummata keenya balleessaa jiran illee ofirraa dhaabuu fi ummata keenya kanarraa fageessuu irratti hojjachuu qabnaa. Qubee tokko sirreessuun maaliif hin taanee, of kabachiisuutti ce’uu qabnaa. Kana jechuun dhimma dhuufaatti gadi bu’uu osoo hin taanee, waan Oromoo ta’aan hundaa lafa qabsiisuuf yaaluun eegalamuu qaba. Bilisummaa booda itti deebina waan jedhan hin jiru. Wayyaanee irriiba dhawwaa, humnaa isa dhumaaf of qopheessuu barbaachisa.waa hundaa irratti akka irreechaatti yoo sochoonee, Rooba taanee, Oromiyaa jiituu ummachuun keenya fagoo hin taatu. Dubbiin baayyateef……… kan hafee karaa keessaa haasofnaa jabaadhaa.